In ka badan 100,000 oo qof oo ka barakacay Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
GURICEEL, Soomaaliya - Iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha billowgii bishan ka qarxay Dowlad goboleedka Galmudug, ayuu Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwidda Arrimaha Bani’aadamnimada UN OCHA, sheegay in xasaraduhu barakiciyeen, in ka badan 100,440 qof maalmihii dhawaa ee la soo dhaafay.
Dadkan barakacay, oo ay ku jiraan haween iyo carruur ayaa ka qaxay guryahoodii oo ku yaalla magaalada Guriceel ee Galcadduud, bartamaha Soomaaliya, iyaga oo naftooda ula baxsaday degaannada miyiga ah ee ku dhow, kuwaas oo markii horeba wajahayay abaaro iyo biyo yaraan.
Xafiiska UN OCHA ee Soomaaliya ayaa sheegay in hay'adaha gargaarka ay ka jawaabayaan dhibaatooyinka bani'aadamnimo ee barakacayaasha, inkastoo ay hay’adaha qudhoodu ay wajahayaan caqabado maaliyadeed oo xaddidaya awooddooda waxqabad ee waqtigaan.
Barakaca dadka ayaa sii kordhaya iyadoo xaaladda magaalada Guriceel ay ahayd mid kacsan maalmihii tagay, kadib markii kooxda Ahlusunna ay 1-dii Oktoobar la wareegtay gacan ku heynta magaalada.
Waxaa isa soo taraya cabsida laga qabo dagaal dhiig ku daato, iyadoo ciidamada XDS iyo kuwa Galmudug oo is garabsanaya ay kaabiga ku hayaan magaalada Guriceel, oo ay difaacyo xoogan ka sameysteen xoogagga taabacsan Ahlu Sunna.
Xaaladda ayaa sii xumaanaysa iyada oo ay fashilmeen dadaallo dhex-dhexaadin ah oo lagu doonayay in lagu joojiyo gulufka ay dowladdu ku qaaday ASWJ. Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu u adeegsaday XDS inuu ku hurinayo dagaal sokeeye oo ka dhaca Galmudug.